Cubot X50: taleefanka casriga ah ee afar geesoodka ah ee 64 MP ah oo qiime jaban | Androidsis
Waa muhiim inaad maanta haysato kaamirad fiican. In kasta oo kamaradda casriga ahi aysan xirfad ahaan u aqoon sida kamaradda dhijitaalka ah, haddana aaladdu waxay u egtahay inay qaaddo sawirro aad u wanaagsan iyada oo ay ugu wacan tahay ka mid noqoshada in ka badan hal dareemayaal oo lagu dhisay dhabarka terminalka.
Waxaa jira in badan oo kamaradaha casriga ah oo awood badan suuqa, si kastaba ha noqotee xulashada taleefanka kamaradda ugu fiican waxay ku lug leedahay wax ka badan oo keliya eegidda muraayadaha kamaradaha. Waxay sidoo kale kuxirantahay qeexitaanada kale, qiimaha iyo qodobka ugu muhiimsan, ee ah faa'iidada. Kuwa ugu fiican dadka kale ayaa laga yaabaa inaysan kuu fiicnayn adiga.
Soo bandhigida aalado cusub oo kamarad cajalado wata, X50 by Cubot. Telefoonkani waa xulasho wanaagsan kuwa raadinaya telefoon leh kamarad weyn. Astaamaha kamaraddu waa sida soo socota: Qalabka kamaradaha Quad ee gadaasha, waxaa ku jira kamarad weyn oo ah 64MP f / 1.8, 16MP f / 2.4 kamarad aad u ballaaran, iyo 5MP f / 2.2 macro camera. Cubot X50 Waxay sidoo kale leedahay mid ka mid ah dareemayaasha ugu awoodda badan xagga hore, oo leh muraayad 32MP ah oo leh quruxda AI.
1 Muraayadaha casriga ah
2 Dareemayaal si ay u qabtaan daqiiqadaha ugu fiican
3 Waxqabadka maalinta oo dhan
4 Dareeraha afraad ee isku dhafan
5 Hal kamarad sawir leh wax walba
6 Qiimaha Cubot X50
Muraayadaha casriga ah
Cubot X50 wuxuu leeyahay muraayadaha indhaha oo aan ahayn kaliya xallinta sare, laakiin sidoo kale si fiican u shaqeeya. Qaado sawir kasta oo sawir ah, sawir muuqaal ah, iyo sawirro dhow. Cubot X50 wuxuu si qurux badan ula qabsaday ku dhowaad dhammaan noocyada sawirrada. Waxaad si sahal ah ugu qabsan kartaa waxkasta faahfaahinta muuqaalka ee ugufiican Samsung 64mm lens-ka xallinta heer sare ah, ku qaado muuqaal dusha sare leh kamaraddeeda 16-ka ah ee aadka u ballaaran, waxaadna ku heli kartaa darbo dhow oo kaamirada kamaradaha Samsung.
Cubot X50 wuxuu leeyahay habab badan oo sawir ah oo la heli karooo ay ku jiraan qaabka sawirka ama qaabka quruxda qaadashada sawir-gacmeedka aadka u muuqda. Habka habeenka weyn wuxuu awoodi doonaa inuu soo qaado sawirro dhalaalaya, isagoo awood u leh inuu soo saaro sawirro cadcad xitaa xaaladaha mugdiga ah. Haddii aad rabto sawir xirfad leh, waxaad isticmaali kartaa qaabka Pro si aad gacanta ugu dejiso cabir kasta.
Dareemayaal si ay u qabtaan daqiiqadaha ugu fiican
Iyada oo afarta dareemayaal ay gadaal ka qabtaan daqiiqad kasta Waxay kaa dhigi doontaa inaad ku xasuusato sawirkaas meel qiimo leh, ama safar kaligiis ama dad gaar ah. Wax walba waxaa lagu keydin karaa keydka 128 GB, xusuusta gudaha oo awood u leh inay keydiso kumanaan sawirro iyo fiidiyowyo ah.
Tayada duubistu waa mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya, dhammaantoodna waxay ku mahadsan yihiin muraayadda Samsung oo ah tan ugu weyn, taas oo ay weheliyaan saddexdaasba muhiim ayey noqon doonaan. Taleefanka Cubot X50 marka laga reebo soo qaadista sawirrada wanaagsan sidoo kale wuxuu ku duubi doonaa tayo sare waana wax iska cad in la dhexgeli karo goob kasta.
Qalabka ugu dambeeya ee gadaal waa Samsung S5KGW1, mid ka mid ah dareemayaasha aadka u koolkooliya shirkadda Kuuriyada Koonfureed, oo si muuqata uga shaqeysay soo saarideeda. Waxqabadka ku jira sawirada ayaa ka dhigaya midka ugu fiican marka laga hadlayo in lagu rakibo taleefannada casriga ah ee heer dhexe ah.
Waxqabadka maalinta oo dhan
Marka laga reebo afarta kamaradood, Cubot X50 hadda wuxuu leeyahay baytari heer sare ah, Batariga la doortay waa 4.500 mAh waana kugu filan hadaad rabto inaad isticmaasho maalinta oo dhan. Waxay u adkeysan doontaa isticmaalka guud, iyo sidoo kale inay awood u yeelato inay sawirro iyo fiidiyoow ku qabato hab fudud oo aan laga xumaanin.
Waxay ballanqaadaysaa inay iska caabinayso isticmaalka sii socda ee codsiyada u baahan fariimaha ugu caansan, ciyaarida mahadnaqa awooda MediaTek chip, iwm. Iyada oo hal lacag lagaa qaado waxay ku filnaan doontaa in la shaqeeyo wax ka badan 24 saacadood oo aan loo baahnayn in lagu dhex maro xeedho, dhibic ka dhigaysa mid taagan.
Dareeraha afraad ee isku dhafan
Cubot X50 wuxuu ku darayaa afaraad 0,3 MP shidma sawir qaade ah Iyadoo toosh 1A ah, waxay noqoneysaa mid muhiim ah oo ka sarreysa dhammaan go'aaminta markay tahay qaadashada sawirro fiiqan oo fiiqan. Saddexda ayaa taageeray kan afraad, sidaa darteed si fiican ayey isugula jaan qaadayaan si ay ugu dambayn u helaan qaar ka mid ah sawirrada midab badan iyo dhalaal badan.
Waa tilmaam, maadaama ay badanaa qoto dheer tahay oo tooshka shukrigiisa awgeed ay soo bixin doonto hufnaan xaalad kasta, ha ahaato ama ma jiro iftiin waqtigaas. 5 megapixel macro ayaa sawiro qaadaya meel fog oo diirad ah oo dhererkeedu yahay 2,5 cm, marka laga reebo baaxad weyn haddii loo baahdo.
Hal kamarad sawir leh wax walba
Kaamirada hore waxay balan qaadeysaa sawirro marka aad sawir qaadaneyso, laakiin intaas oo keliya maahan, haddii aad rabto inaad wicitaanno fiidiyoow ah sameyso, waxaad ku sameyn doontaa xallinta Full HD. Ka sokow, waxay sidoo kale duubtaa fiidiyowyo leh tayo sare waxayna qaadaysaa talaabo muhiim ah, iyadoo leh qaab qurux ah AI oo loogu talagalay dadka ku dhow.
Ku qaadashada sawirada ugu fiican waxay noqon doontaa hawo, mahadsanidiin qaababkeeda kala duwan iyo 32 megpixels oo ka dhigaya kamarad qurux badan. Waad ka tagi kartaa qabashada wali sawirada ilaa fiidyowga wax kabadan hal guji adigoo awood u yeelanaya inaad u bedesho qaabka shaashadda laftiisa oo aad gadaal uga laabato haddii aad rabto inaad sawirro ka qaaddo muuqaalka muuqaalka, dadka iyo deegaannada kale.
Qiimaha Cubot X50
Cubot X50 wuxuu la yimaadaa kamarad afar geesle ah 64 MP iyadoo qiimo jaban oo gaaraya $ 179,99. Xitaa ka sii yaab badan, Cubot wuxuu bixiyaa rasiidh si hoos loogu dhigo qiimaha $ 169,99 gudaha AliExpress laga bilaabo May 17.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Cubot X50: taleefanka casriga ah ee afar geesoodka ah ee 64 MP oo ah qiime jaban
Dib u eegista Alexa, ma mudan tahay in mid la iibsado?
Ciyaaraha ugu wanaagsan ee Android si loola dagaallamo diiqadda